Omaki abadume kakhulu nabadingekayo ukuze basebenzise i-Ecommerce | Martech Zone
Omaki abadume kakhulu nabadingekayo ukuze basebenzise i-Ecommerce
NgeSonto, Okthoba 22, 2017 NgeSonto, Okthoba 22, 2017 Douglas Karr
Ukuze usebenzise, ​​ulinganise, futhi uthuthukise noma yiluphi ushintsho ukuze uthuthukise imiphumela yakho ye-ecommerce, ukuthwebula idatha ephathelene nawo wonke umsebenzisi nezenzo kubalulekile. Awungeke uthuthukise ongakulinganisi. Okubi kakhulu ukuthi uma ukhawulela lokho okwenzayo, ungenza izinqumo ezilimaza ukuthengisa kwakho online.
As I-Softcrylic, Isidlali esingathathi hlangothi seDatha & Izibalo esidlalayo, ukuphathwa kwamathegi kusiza Abathengisi Bedijithali ngemininingwane ethuthukile ekulandeleni izivakashi, ukuqondiswa kokuziphatha, ukumaketha kabusha, ukwenza ngezifiso kanye nokuqinisekiswa kwedatha.
Ukumaka kukuyo yonke indawo ngokufaka imibhalo kanye nokufaka idatha ehambisana nesayithi lakho. Amapulatifomu wezibalo athatha inqwaba yamathegi ngokufakwa okuyisisekelo. Ngaphandle kokuthi uhlanganise idatha ukuze uyithathe kupulatifomu yakho ye-e-commerce, noma kunjalo, amathegi amaningi abucayi alahlekile.
Le infographic evela kuSoftcrylic inika imininingwane ngamathegi okufanele uwasebenzise ku- ikhasi lasekhaya le-e-commerce, ikhasi lokuthenga, ikhasi lomkhiqizo, ikhasi lenqola, ikhasi lokuphuma, nekhasi lokuqinisekisa.
Banikela nangemikhuba emihle ekusebenziseni ukumaka, kufaka phakathi:
Ukucwaningwa Kwamathegi - Ukuhlolwa Kwamathegi kungukufika ngesikhathi, ukuhlolwa okuhlelekile nokuqinisekisa ikhwalithi okuzenzakalelayo kwamathegi ukukhomba kahle nokulungisa amathegi aphukile, ukusebenza ngokudubula, imvamisa, ukunemba kwedatha nokuvuza kwedatha.
Ukuphathwa Kwethegi Okuqhutshwa Kwedatha - Ukusebenzisa i- "Data Layer" eyakhiwe kahle kusiza ama-Tag Management Systems ukuthi athole ukulawula okuphelele, ukuguquguquka, nokwethenjelwa ngokushintshaniswa kwedatha kuzingxenyekazi kanye nokudubula kwamathegi ngokwezifiso zomthetho.
Ukulinganisela Amathegi we-Piggybacking - I-Piggybacking inkemba esika nhlangothi zombili. Kuyasiza ekuhleleni kabusha kangcono. Kodwa-ke, lapho ingaphathwa kahle, ingakhuphula isikhathi sokulayisha ikhasi, ifake engozini ukuphepha kwedatha futhi idicilele phansi igama lomkhiqizo.
Nayi i-infographic. Ungalanda ifayela le- I-PDF evela kuSoftcrylic.
Tags: izibalo zama-analyticsikhasi lezinqolaikhasi lokuphumaikhasi lokuqinisekisaikhasi lasekhaya le-e-commerceamathegi e-commerceukumakwa kwe-ecommerceamathegi we-ecommerceinfographicikhasi lomkhiqizoikhasi lokuthengaethambileukuhlolwa kwamathegiukuhlolwa kwamathegiukuphathwa kwamathegiukumakatagsngiyabonga ikhasiamathegi wewebhusayithi
Uyacelwa Ungaphenduli Isicelo Sezinkundla Zokuxhumana Ngale Ndlela